Codsiyada ugufiican ee guriga looga shaqeeyo | War gadget
Codsiyada ugufiican ee guriga looga shaqeeyo
Ignacio Sala | | Aplicaciones, General, Windows
Ka shaqaynta guriga waxay umuuqataa utopia dhammaan dadkaas aan waligood fursad u helin inay sameeyaan. Dhibaatada coronavirus, shirkado badan ayaa ka fiirsanaya inay u oggolaadaan shaqaalaha qaarkood, sida ugu macquulsan, inay uga shaqeeyaan guryahooda, si aysan gabi ahaanba u curyaamin howlaha shirkadooda.
Nidaamka deegaanka ee codsiyada maanta loo helo kombiyuutarada iyo aaladaha gacanta waa mid aad u ballaadhan waxaanan ka heli karnaa xalal nooc walba leh oo aan uga shaqeyn karno meel fog sida haddii aan shaqsi ahaan u samaynayno. Haddii aadan tixgelin kuwa codsiyada ugu fiican ee guriga looga shaqeyn karo, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhriska.
1 Marka ugu horeysa
2 Barnaamijyada isgaarsiinta
2.1 Kooxaha Microsoft
3 Barnaamijyada lagu abaabulo shaqada
4 Codsiyada qoraalka, abuurista xaashiyaha ama bandhigyada
4.1 Xafiiska 365
4.2 Bogagga, Nambarada, iyo Nuxurka
5 Codsi si loogu xiro kombiyuutarada kale meel fog
5.2 Desktop-ka fog
Marka ugu horeysa
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan dejino howlo aan ka bixi karin, taas oo ah, inaan u tixgalino shaqada sidii inaan ku jirno xafiis jireed, oo leh nashaadaaddiisa qaxwada, nasashada qadada. Sidoo kale waa inaan dejino jadwal shaqo. Ka shaqeynta guriga micnaheedu maahan in marwalba aan ubaahan nahay maamulaha ama, hadii aan nahay, waa inaan shaqeynaa 24 saacadood maalintii.
Haddii aan ka shaqeyno guriga oo aan diiradda saarno shaqadeena kombuyuutarka, waxaan dooneynaa in wax walba laga helo kombiyuutarkayaga. Haddii ay tahay inaan u isticmaalno taleefannadeenna casriga ah si aan ula hadalno asxaabta, waxaan si dhakhso leh u mashquulin doonnaa Instagram, Facebook, Twitter ama annaga oo ka jawaabeyna ogeysiisyada WhatsApp. Suuqa waxaan ku leenahay codsiyo kala duwan oo ku wajahan jawiga ganacsiga oo ka fogaanaya dhibaatooyinkaas.
Microsoft Teams waa aaladda Microsoft ay diyaar u tahay inaan ka shaqeyno oo kaliya guriga, laakiin sidoo kale xafiiska, si aan ula xiriirno asxaabteena adigoon isticmaalin taleefanka waqti kasta. Kaliya noo oggolaan mayno inaan wadahadalno, laakiin sidoo kale waxay noo oggolaaneysaa inaan si dhakhso leh u dirno faylasha. Intaa waxaa dheer, in lagu dhex daro Office 365, markay tahay in si wadashaqeyn ah looga shaqeeyo dukumiintiyada waa xalka ugu fiican. Microsoft gebi ahaanba waa bilaash.
Slack wuxuu ahaa mid ka mid ah codsiyada ugu horreeyay ee lagu dhufto suuqa si loo hagaajiyo isgaarsiinta ganacsiga. Waxay noo oggolaaneysaa inaan dirno nooc kasta oo feylal ah, abuurno shirar macmal ah ... laakiin nama siinayso is-dhexgal xafiiska 365, marka haddii aad inta badan ka shaqeyso dhowr qof isla dokumentiga, xalka ay Microsoft na siiso waa midka ugu habboon. Slack-ku waa u bilaash tiro isticmaaleyaal ah, halka Kooxaha Microsoft ay la xiriiraan ku-qoritaanka Office 365.
Sanadihii la soo dhaafay, Microsoft waxay awood u yeelatay inay la jaan qaado baahiyaha dadka isticmaala waxayna ku dartay howlo cusub oo ku saabsan wicitaanada Skype iyo codsiyada wicitaanada fiidiyowga, codsi gebi ahaanba bilaash ah oo waliba noo ogolaanaya inaan dirno nooc kasta oo feylal ah iyo in, sida Kooxaha Microsoft , waxaa lagu dhex daray Office 365. Skype waxaa laga heli karaa iOS, Android, macOS, iyo Windows.
In kasta oo ay tahay codsi fariin ah, sida WhatsApp, haddana kala duwanaanta ay ku bixiso arjiga kombiyuutarada ayaa ka dhigaysa codsi aad u fiican oo ku saabsan wada shaqeynta guriga. Intaas waxaa sii dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan sameyno wicitaano maqal ah, sidaas darteed waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa inaan kulano kulano asxaabtayada. Telegram gabi ahaanba waa bilaash waxaana laga heli karaa Windows, macOS, Android, iyo iOS.
Barnaamijyada lagu abaabulo shaqada
Markay tahay abaabulka howlaha qof kasta iyo shaqaale kasta oo shirkadeed ay tahay inuu qabto, waxaan haynaa arjiga Trello ee aan gacanta ku hayno. Trello waxay na siisaa dashboard farshaxan ah oo aan ku abaabuli karno kuna qori karno howlaha ay tahay inay shaqaaluhu qabtaan. Markay dhammeeyaan, way calaamadeeyaan oo waxay aadaan midka xiga. Trello waa lacag la'aan oo laga heli karaa labada macruufka iyo Android, Windows, iyo macOS.
Codsiyada qoraalka, abuurista xaashiyaha ama bandhigyada
In kasta oo qaybtani u muuqan karto wax aan macquul ahayn, haddana maahan haddii aadan si joogto ah u isticmaalin kombuyuutarkaaga guriga inaad ku shaqeysid, maadaama ay u badan tahay inaadan haysan wax codsi ah oo lagu rakibo oo lagu qoro dukumiintiyada, lagu abuuro xaashiyaha ama bandhigyo.
Markaad abuureyso nooc kasta oo dukumiinti ah, xalka ay bixiso Microsoft waa tan ugu fiican uguna dhameystiran ee aan maanta suuqa ka heli karno. Kaliya laakiin waa inay u baahan tahay rukhsad Xafiiska 365, oo ah rukhsad aan noo oggolaanayn oo keliya in aan isticmaalno arjiga kombuyuutarka, laakiin sidoo kale noo oggolaanaya inaan ku isticmaalno Word, Excel iyo Powerpoint shabakadda, adigoon ku rakibin barnaamijyadooda waqti la'aan. .
Qiimaha rukunka sanadlaha ah ee Office 365 Personal (1 isticmaale) waa 69 euro (7 euro bishii). waxaana ka mid ah Word, Excel, Powerpoint iyo Outlook oo loo maro biraawsar iyo Access iyo Publisher oo ah codsi kombuyuutar ah. Waxaa loo heli karaa Windows, macOS, iOS iyo Android
Haddii aan qorsheyneyno inaan ka shaqeyno guriga mustaqbalka, ma heli doonno xalka tan ka wanaagsan, kaliya maahan iswaafajinta iyo jaangooynta qaabkeeda, laakiin sidoo kale tirada badan ee xulashooyinka ay na siineyso, fursadaha daboolaya wixii baahi ah ee maskaxdeenna soo gala.
Haddii aad tahay isticmaale Mac ah, Apple wuxuu nagu siiyaa Bogag, Tirooyin iyo Muhiim ah bilaash, codsiyo aan ku abuuri karno nooc kasta oo qoraal dukumeenti ah, warqad soo bandhigid ah. In kasta oo tirada xulashooyinka ay na siisaa aysan ka sarreeynin tan Xafiiska, haddana way ka badan tahay ku filan inta badan adeegsadayaasha. Dhibaatada uu barnaamijkani na siinayo ayaa ah inay leedahay qaab u gaar ah, taas oo nagu qasbi doonta inaan u dhoofino dukumiintiyada aan abuurnay qaabab .docx, .xlsx iyo .pptx
Beddelka bilaashka ah ee Google ay na siiso, oo loo yaqaan 'Google Docs', ayaa noo oggolaanaya inaan ka sameysano dukumiinti shabakadeena adigoon kala soo dagin wax dalab ah. Dhibaatada haysata Google Docs ayaa ah inay isticmaasho kordhinteeda, kordhin aan la jaan qaadi karin Xafiiska, sidaa darteed waxaa nagu qasbi doona inaan badalno mid kasta oo ka mid ah dukumiintiyada aan abuurno, iyadoo halista luminta qaabkeeda ay tahay.
Codsi si loogu xiro kombiyuutarada kale meel fog
Maahan in qof kastaa nasiib u yeesho inuu ka shaqeyn karo guriga sababo la xiriira xaqiiqda ah in shirkaddaadu isticmaasho codsi maamul oo kaliya laga heli karo shirkaddaada. Waxay kuxirantahay soosaaraha arjiga, waxaad ubaahantahay ikhtiyaar noo ogolaanaya inaan ka shaqeyno kombiyuutaro kale internetka. Haddii kale, sidoo kale xal ayaa jira.
TeamViewer waa mid ka mid ah noocyada xisaabaadka xisaabaadka, maadaama sida Xafiiska oo kale, uusan waligiis la yeelan tartan adag oo bixiya isla qaababka. TeamViewer wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel fog ka maamulno qalab kasta, qalab aan ka koobiyeyn karno ama ka diri karno feylasha, la sheekeysan karno isticmaaleyaasha isku midka ah ama wixii kale ee maskaxda ku soo dhaca. Adeeggan waxaa laga heli karaa labada nooc ee iOS iyo Android, Windows iyo macOS, laakiin ma ahan bilaash, inkasta oo ay tahay xalka ugu fiican ee meel fog lagala xiriiri karo kombiyuutarka.
Chrome Remote Desktop waa xalka bilaashka ah ee Google ay na siiso si aan awood ugu yeelano inaan kula xirirno meel fog kombiyuutar kale, ama aan u isticmaalno arjiga maamulka ee aan xafiiska ku isticmaalno, inaan la tashano dukumiinti, si aan ugu xallino dhibaatada ka socota kombiyuutarka. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo heli karaa labadaba macruufka iyo Android, sidaa darteed waxaan ka heli karnaa meel fog fog taleefannada casriga ah ama kaniiniga.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Codsiyada ugufiican ee guriga looga shaqeeyo
Isbarbardhig: Samsung Galaxy S20 VS Huawei P30 Pro
Waxaan si qoto dheer u eegeynaa Samsung Galaxy S20 5G cusub